Isleged, Guddoomiyaha goblka Sool ee Somaliland oo ka badbaaday isku day dil. – Radio Daljir
Maajo 12, 2011 12:00 b 0
Laascaanood, May 12 – Guddoomiyaha goobolka Sool ee maamulka Somaliland C/llaahi Jaamac Isleged ayaa caawa ka badbaadey weerar qunbulad gacmeed ah oo lagu weeraray xilli uu ku sugnaa guriga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Inta la og yahay laba ka mid ah ilaaladiisa ay dhaawacyo soo gaareen, walow uusan isagu waxba ku noqon weerarka; weerarka ayaa dhacay abaaro 9:00 cawaysnimo ee caawa (Arbaca, May 12).
Waxaa la sheegay in weerarka ay fulisay koox summad laawe ah oo gunbulad gacmeed ku tuuray guriga gudoomiyaha iyadoo tuuryadaasi ay dhaawacday laba ka mid ah ilaaladiiisa; kooxda gaysatay fal-dambiyeedka ayaan la qaban.
Weerarka ayaa lagu sheegay in uu ahaa mid lagu damacsanaa in lagu khaarajiyo guddoomiyaha maamulka Somaliland ee gobolka Sool, Md. Isleged.
Weerarka ayaan ahayn mid aragax ama cabsi dheeraad ah abuuraya, maadaama magaalada Laascaanood falalka noocan ahi ay ka noqdeen wax iska caadi ah oo aan cidna shido ku abuurin.
Mas’uulkan ayaan ahayn midkii ugu horeeeyey oo ka tirsan maamulka Somaliland oo weerar lagu qaado magaalada Laascaanood; waxaa tan iyo intii maamulka Somaliland qabsaday magaalada Laascaanood sannadkii 2007 soo badanayey marba marka ka danbeysa dilalka iyo weerarada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsado madaxda, mas’uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka ee ku magacaaban gobolka Sool.
Warbixin ku saabsan raad-reebka maamul-gobaleedyada ku soo badanaya Somaliya, maxayse soo kordhin karaan?